Rudzi: basa nebasa
Maneja Wemubatsiri: Zvinzvimbo uye Unhu hweMunhu
Mubatsiri wega kumaneja ibasa riri kudiwa zvakanyanya panguva ino. Chekutanga pane zvese, izvi zvine chekuita nekuvandudzwa kwehupfumi hwepamusika, nekuti mune mamiriro emakwikwi akaomarara, mamiriro emari ekambani chero ipi anoenderana ...
Chii chinoitwa otomatiki maitiro ekudzora system mainjiniya? Izvi zvichakurukurwa munyaya ino. Nezve iro basa Iwe unogona sei kutsanangura muchidimbu iro basa riri kutaurwa? Anjiniya weAPCS munhu ...
Maneja weresitorendi: mabasa, mabasa. Maitiro ekutarisira nzvimbo yekudyira?
Iresitorendi inzvimbo inoenda kunozorora nevanhu, kwavanogona kuzorora, kuravira chikafu chinonaka, kuteerera mimhanzi yakanaka. Asi kune vamwe, nzvimbo yekudyira ibasa. Uye maneja weresitorendi - ...
Feller yedondo: zvinodiwa, maitiro ebasa
Feller ibasa rinogoneswa nemurume chaiye. Iri basa rinoda simba rinoshamisa remuviri uye hunyanzvi hwakasimbiswa. Uye kana ivo vakomana vaine matambudziko akasarudzika neyekutanga ...
Chii chichava muhupenyu? Nzira yekuita sarudzo chaiyo?
Ndiani asati akambobvunza muhupenyu hwavo mibvunzo iyi: "Ndiani kuti uve mune ramangwana? Nderipi basa raungasarudze? " Isu taifunga kuti zvaive nyore. Vamwe vakataura kuti ivo vachave vagadziri, vamwe - vanachiremba, ...
Chemical mvura inonatsa: tsananguro yebasa, kudzidziswa maitiro uye ongororo
Injini yekupisa magetsi yagara iri imwe yenzvimbo dzinodiwa uye dzinodiwa nzvimbo dzekushanda. Ndosaka iro basa remakemikari ekurapa mvura oparesheni yakakosha. Zvese zvinyengeri uye maficha ebasa iri zvinokurukurwa mberi. Who…
Shanda paMagnet: ongororo uye maonero
Usamhanye kuwana basa usingazive nezvazvo. Neraki, ikozvino zvave nyore kuita izvi, nekuda kweInternet uye chishuwo chevanhu chekugovana nhamo kana "kurasa" chokwadi. Semuyenzaniso,…
Profession driver. Tsananguro yebasa, muhoro
Basa rekutyaira ndeimwe yeanonyanya kudiwa munyika zhinji. Kuvandudzwa kwenzvimbo dzekufambisa kunowedzera izvo zvinodikanwa kune vatyairi uye hunhu hwavo hwehunyanzvi. Sarudzo yeiri basa inoreva kwete chete kuda kushandisa ...
Rotational basa nzira (chinja). "Stakhanov": wongororo dzemushandirwi dzinopa basa mukutenderera
Pane imwe nguva apo basa rakanyanya kunetsa kuwana, nyanzvi zhinji dziri kutsvaga mimwe mikana yemabasa. Varume nevakadzi vane simba remuviri uye kutsungirira vari kuwedzera kufarira nzvimbo dzinopa nzira yekutenderera nzira. Mamiriro ezvinhu ...
Ndiani ari speleologist? Chii chinoitwa nespeleologist? Chii chinotsvagirwa nespeleologist?
Ndiani ari speleologist? Mubvunzo wakafanana unomuka kuvanhu vazhinji vakanzwa zita reimwe yemabasa ane njodzi uye anobatsira. Chinhu ndechekuti iri harisi iro basa rakajairika, chairo ...
Kuchengeta nde ... Nzira uye nzira dzekukwezva vanokodzera vanokwikwidza pachinzvimbo
Kuchengeta kunoreva zvakafanana ne “kubatira,” kunobva kuAmerican English. Iri izwi rinoreva maitiro akajairika ekukwezva, kusarudza uye kubvumidza vanokodzera basa vanotsvaga basa risingaperi kana renguva pfupi ...
Kuedza basa: "kurongedza". Hazvisi nyore kudaro…
"Kutsvaga basa semutakuri" - kushambadzira kwakadaro hakuwanzoitika, nekuti hapana basa rine zita iro. Zvekudya mabhizinesi, uye mamwe matura, uye mafekitori anogadzira ...
Iye governess ndiye…. Zvinoreva izwi rekuti "governess". Ndeipi basa remutariri?
Paunoverenga kana kunzwa izwi rekuti "governess", ipapo munhu wega wega ane zvakati wandei zvekudyidzana. Ini handizive kuti chero munhu anazvo sei, asi kwandiri muridzi, kutanga kwezvose, zvinyorwa zvekunyora zvaMaria ...
Basa remauto muRussia
Kutenda kuvandudzwa kwakaitwa munguva pfupi yapfuura mukati meMasoja eRussia Federation, basa remauto munyika rakawedzera zvakanyanya. Iye zvino basa remauto haringori zita rekuremekedza uye mubhadharo wakanaka, asi zvakare ...
Nei mabasa matsva ari kubuda? Nekuti matunhu matsva ari kuvandudzwa zvese mupfungwa chaiyo yeshoko uye nenzira yekufananidzira. Vanhu vanotanga kufarira chimwe chinhu chakasiyana zvachose, vanogadzira mimwe minda yekugadzira uye, ...
Executive Director Mabasa uye Kodzero
Iyo CEO chinzvimbo chiri kuramba chichijairika mumakambani ayo ari kuita mune dzakasiyana zviitiko. Kana uchinyorera chinzvimbo ichi, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeapi mabasa nekodzero ane uyu mushandi. Mabasa eEECO ane zvakawanda ...
Sei ndichida kindergarten mudzidzisi nyaya yepodfolio?
Imwe nguva yapfuura, zviyero zvitsva zvakagamuchirwa kuti zviitwe nevashandi vevadzidzi vechikoro chekuchikoro (DOU). Kunze kwemagwaro anosimbisa kutevedza kwehunyanzvi nechinzvimbo chakabatwa, zvinodawo kugadzirira rondedzero yemudzidzisi wekireshi. Nezve portfolio, izvi ...
Chii chinonzi mechanic? Profession Kuongorora
Chii chimakanika? Zvingaita sekuti zvakajairika basa, hapana chakaomarara. Asi iwe unofanirwa kunzwisisa zvishoma, uye zvinobva zvangojeka - havazi vese vanogona kuzviziva. Mushure mezvose, uyu nyanzvi anochengeta ...
Musoni munhu webasa rekugadzira
Hazvisi zvakavanzika kuti sutu inoenderana nemufananidzo kana yakagadziriswa zvine hungwaru uye zvakashongedzwa zvakanaka. Vanhu vazhinji vanosarudza kuve neyakagadzirirwa kusona muchitoro chevasoni. Neese akasiyana akasiyana akagadzirira-akagadzirwa zvinhu, iwe unogara uchida chimwe chinhu ...
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 2,964 masekondi.